Sawirro: Weerarkii Al-Shabaab Ku qaaday Mandheera | Baydhabo Online
Sawirro: Weerarkii Al-Shabaab Ku qaaday Mandheera
Ugu yaraan 6 Ruux ayaa ku dhimatay 27 Qof oo kale ayaa laga badbaadiyay sida ay sheegayaan Boolisk Kenya kadib weerar Xalay Al-shabaab ay ku qaadeen Dad Kenyaan ah oo ku sugnaa Magaalada Mandheera.
Ciidan ka tirsan Al-shabaab ayaa weeraray goob laga bixiyo adeegyada Bulshada oo lagu magacaabo Bulla,waxaana halkaas ku dhintay 6 Qof,sidoo kale intii uu weerarka socday ayey Boolisku sheegeen in Dad badan afduub ahaan loo qabsaday.
Guddoomiyaha Mandheera Cali Roobow ayaa sheegay in Dadka la dilay iyo kuwa la badbaadiyayba aysan ahayn Soomaali ee ay yihiin Kenyaanka kale,waxaana xilliga weerarka dhacay ku sugnaa dhismahaasi 33 Qof oo Kenyaan ah.
Weerarka ayaa dhacay xalay 2:45 ee xilligii dambe,waxaana Roobow uu sheegay in ay khasaare weyn tahay in lix qof ay dhintaan inkasta oo tiro ka badan la badbaadiyay.
Ciidanka Kenya ayaa isu diyaarinaya in ay galaan Dhismaha uu weerarka ka dhacay si ay u soo saaraan dadka ku dhintay weerarkaasi,waxaana ay tuhunsan yihiin dhismahaasi ay ku jiraan walxaha qarxa oo tiro badan.
Wararku waxay intaas ku darayaan in qarax dhacay markii boolisku isku dayay inay gudaha ugalaan guriga inkastoo qaraxaas aysan cidi wax ku noqonin.
Boolisku wuxuu sheegay in miinooyin lagu aasay guriga ay hakad gelisay in meydadkii laga soo saaro gudaha gurig
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Frederick Shisia ,ayaa sheegay in ay hadda ka shaqeynayaan sidii ay u jari lahaayeen Isgaarsiinta degaanka si ay ciidanka ugu suuragasho in ay galan dhismaha uu weerarka ka dhacay halkaas oo ay rumeysan yihiin in ay ku jiraan Qaraxyo ay ka tageen Al-shabaab.
Ururka Al-shabaab wali kama hadlin weerarka xalay ka dhacay mandheera,Saraakiisha Gobolka Mandheera ayaase sheegaya in weerarkan ay fulisay Ururka Al-shabaab.
Tan iyo 2011kii Markii Ciidanka Kenya ay Soo galeen Gobolada Koonfureed ee Soomaaliya,Shabaab waxey kordhiyeen Weerarada ay ka geystaan gudaha Kenya iyagoo Jawaab uga dhigayay sidey sheegteen Howlgalka Ciidanka Kenya ay ka wadaan Soomaaliya